Samsung Galaxy A30 ကိုယခုအဖြူရောင်ဖြင့်လည်းရနိုင်သည် Androidsis
Samsung Galaxy A30 ကိုယခုအဖြူရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
လွန်ခဲ့သော ၄ လခန့်က Samsung သည်၎င်း၏ဈေးအပေါဆုံးအလယ်အလတ်တန်းစားအရာရှိတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကတ်တလောက်ထဲတွင်အကျော်ကြားဆုံးစီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဖုံးလွှမ်းထားသောပုံမှမှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်း၊ က galaxy A30.
ကန ဦး အခိုက်အတန့်၌အနီရောင်၊ အပြာနှင့်အနက်ရောင်တို့ကိုကွဲပြားသောအရောင်ရွေးချယ်မှုသုံးမျိုးဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အခုတော့ အဖြူဖြစ်သောအသစ်မူကွဲ.
နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူ classy နှင့်အလွသွားကြဖို့အချိန် # GalaxyA30ယခုအဖြူ၌တည်၏။ ယနေ့သင်၏ကိုရယူပါ 15,490 ၁၅,၄၉၀ / - #BuiltForTheEraOfLive
ပိုမိုလေ့လာပါ https://t.co/oK9CdVxZnp pic.twitter.com/8O2TE7e2gE
- Samsung India (@SamsungIndia) ဇြန္လ 12, 2019
Samsung Galaxy A30 ကိုအဖြူရောင်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ Terminal သည်လေကောင်းလေသန့်ရရှိပြီး၎င်း၏လှပသောအသွင်အပြင်ကိုပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အလားအလာများနှင့်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည်ထိုနိုင်ငံအတွက်ကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းအနည်းဆုံးအစပိုင်းတွင်အိန္ဒိယအတွက်သာရူပီး ၁၅,၄၉၀ (~ ၁၉၇ ယူရိုသို့မဟုတ် ၂၂၁ ဒေါ်လာ) ဖြင့်ရနိုင်သည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်စမတ်ဖုန်းတွင်aနှင့်ပါရှိကြောင်းဖော်ပြသင့်သည် ၆.၄ လက်မ Super AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့် FullHD + resolution 6.4 x 2,340 pixels ရှိသည်။ ၎င်းတွင် 16 megapixel ရှေ့ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည့်ရေပေးခန်းငယ်တစ်ခုလည်းရှိသည်။
မိုဘိုင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည် Exynos 7904 ကကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်3/4 GB RAM နှင့် 32/64 GB သိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 16 and5MP dual-camera နောက်ဘက်ကင်မရာ module တစ်ခု၊ ၄၀၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီကိုလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်မှု၊ နောက်လက်ဗွေဖတ်ကိရိယာ၊ NFC ဆက်သွယ်မှုနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung Galaxy A30 ကိုယခုအဖြူရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
ဂျီမေးလ်သည် download ဘီလီယံ ၅ ဘီလီယံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်သည်